Fikradaha naqshadda 24 Fikradda Fikradda ee loogu talagalay Raga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Fikradda naqshadaynta ee 24 ee Fikradda Wanaagsan ee loogu talagalay Ragga iyo Haweenka
Isticmaalka dharbaaxada Skull wuxuu u adeegi karaa ujeedooyin wakiil ah. Macnaha waxay noqon kartaa dhimasho iyo dhimasho. Waxaad u baahan tahay inaad sameyso baaritaano ka hor intaadan isticmaalin tattoo qalfoofka.
Tulloo macnaheedu yahay
Tartanka Tartanka Macnuhu waxay ku kala duwan yihiin hal meel oo kale. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah kabo, waxayna leeyihiin macnahooda. Fikradda ah in dhakhtarku micnaheedu yahay dhimashada dad badan oo badan ayaa laga yaabaa inayan run ahayn gaar ahaan marka la keeno ilbiriq badan oo indhaha ah. Qalabka ayaa loo qaadi karaa siyaabo badan oo ay ku dhamaato macnaha weyn ee aad jeclaan lahayd. Tattoo skull wuxuu noqon karaa xusuusin qof geeriyoodey iyo sidoo kale in aan dhamaanteen noloshaan ugu noolaanno si buuxda.
Noocyada dhirta ayaa sidoo kale leh macnahoodu sida sonkorta caanka ah ee caanka ah oo badanaa loo yaqaan "tattoo skulls" ama kafateeriga shaatiinka. Tusaale ahaan dadka reer miyiga ah waxay jecel yihiin Maalinta Tafafiraha Dhimasho sababtoo ah doorka ay ka dhigan tahay.
Dumarka isticmaalaya shaati-tuubooyinkaas waxay badanaa ku sameeyaan midab wacan si ay u siiyaan macnaha dheeraadka ah. Waxaa jira dad ku dhajiya khadka dhererka leh gaar ahaan burcadbadeedda, tattoo waxaa ku jira micno badan marka loo eego qofku sawir.
Dumarku waxay badanaa isticmaalaan midabyo si ay u bedelaan habka ay dadku u arkaan #tattoo iyo macnuhuna waa kuwo aad u fiican.
1. Qulqulka Sunflower fikradda naqshadeynta ee wiilasha lugta
Wadno xanuunka ayaa badanaa loo arkaa inay yihiin waxyaabo caan ah ama madadaalo leh laakiin marka ay timaado shaati-yada, dhakaatiirtu way ka duwan yihiin wax badan oo aynu ka fikirno. Qaar ka mid ah muraayadaha khadadka ah sida matalaad muhiim u ah wax.
2. On gacanta gacanta qabow kafateer cufan mug leh fikradda ah ee guys
Kuwani waa qaar ka mid ah su'aalaha aad u baahan tahay inaad ka jawaabto ka hor intaanad tattoo u helin naftaada.
3. Tullow qoob-ka-ciyaarka ah oo ku habboon fikradda saxda ah ee wiilasha
Waxaad tahay naqshadeynta naqshadda sawirkaaga. Markaad heshid shaati-ka-diiraddaada oo diirada saarta maskaxdaada ama aad ka jawaabtay su'aashaada adigoo metelaya fikrad gaar ah, waa masuuliyadaada inaad hesho farshaxan
4. Madax xanuunka naqshadeynta sawirka tattoo fikradda ragga
Waxaa jiray wakhti ay raggu ahaayeen kuwa kaliya ee kufilnaa jidhkooda.
5. Maskaxda garbaha waa fiyuuska naqshadeynta ee caruurta
Goonku waa maalmaha ay dadku ka baqayaan waxyaabaha qaarkood sidan oo kale. Iyada oo tattoo noqoshada foomka farshaxanka, waxaan aragnaa dad badan oo qiray tattoo sidan oo kale ah.
6. Naqshad jilicsan oo loo yaqaan 'tattoo skull' oo ku saabsan dumarka dib loo soo celiyay
Iyada oo tirada fanaaniinta onlineka ah, helitaanka farshaxankaagu wuxuu noqon karaa waayo-aragnimo murugo leh taas oo ah sababta aan kugula talin lahayn inaad u baartid ka hor intaanad helin.
7. Fikradda naqshadeynta caleenta iyo caleenta dharka
Sida dadku u abuuraan waxyaabo kala duwan oo ku saabsan tattoo sida tan waxay ka dhigeysaa xitaa raaxo badan. Maxaad u maleyneysaa?
8. Fikirka naqshadeynta dharbaaxada leh ee quruxda buluugga ah ee garabka ragga
Sheekada ayaa maanta isbedeshay iyadoo ragga iyo haweenku ay hadda isticmaali karaan tattooankan iyada oo aaney jirin meel ka baxsan.
9. Kijirada badhka fikradda caanoodka caanka ah ee ragga
Tattoo this # designe ah ayaa laga yaabaa in ay ka eegaan meel ka baxsan halkan. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan haysan farshaxan kaas oo si fiican ugu matalaya jidhkaaga, waxay noqon kartaa musiibo.
10. Cajiibka dhagaxa miyuusigga ah ee caanka ah tattoo inkirsan ragga ragga
Dad badan ayaa waqtigooda iyo lacagtooda ku qaatay iyagoo isku dayaya in ay helaan tattoo dhamaystiran oo keliya si ay u dhammeeyaan shaqo tattoo oo xun.
11. Garbaha looxa dharbaaxo dharbaaxo ah oo loo yaqaan 'tattoo' oo loogu talagalay wiilasha
Xaaladda sii xumaantu waxay mar walba dhacdaa marka dadku ay helaan sawirada sawirada oo joogta ah. Waayo-aragnimadu waa wax aan la qiyaasi karin.
12. Qaybta bidix ee naqshadda jidhka oo leh qaboojiye dhar qabow
Tattoo sidan oo kale ah ayaa lagu riixi karaa qayb kasta oo jirka ka mid ah. Markaad ku leedahay qaybtan jirkaada, ma joojiso raadinta adadag. Waxa ugu horreeya ee aad sameyn kartid waa inaad hesho xirfadle xirfad leh oo kaa caawin doona qaab-dhismeed cajiib ah
13. Diyaarad balanbaalis fikrada naqshadeynta jilicsan ee garabka ragga
Muxuu yahay naqshadda qalfoofka waa wax aad u baahan tahay inaad fahamto ka hor intaadan isticmaali karin. Waxaad xariifin kartaa qaabka aad naqshadda u qaabeysan tahay sida aad u rabto inay noqoto. il image
14. Biceps fikradda caanoodka tattoo inkirta wiilasha
Hase yeeshee, waxay ka dhigan tahay waxyaabo badan haddii aadan ogeyn. Waxaa loo isticmaali karaa inay metelaan awood, xoog iyo ilaalin. Kuwa ay tahay inay waayo-aragnimo u yeeshaan dhimashada ama dhimashada, waxay inta badan u isticmaalaan si ay uga gudbaan cabsigooda. il image
15. Garbaha loo dhigo hal-gacmeedka sawir-dhiseed oo sawir-dhis leh oo loogu talagalay guys
Dadka qaarkood waxay u isticmaalaan si ay u calaamadiyaan noloshooda hore. Waxay xitaa u noqon kartaa dabeecad xun. il image
16. Fikirka naqshadda dhejiska ee naqshadda gacanta
Marmarka qaarkood, dharbaaxo xayawaanka ayaa loo isticmaalaa si loogu digo dadka iyo sidoo kale calaamad guul ah. Naqshadaan waxaa loo soo qaadan karaa qaabab kala duwan iyo cabbirro kala duwan. Waxaad xitaa ka dhigi kartaa dumar dheeraad ah haddii aad rabto. il image
17. Garbaha loo maro mindhicirka lafa-gacmeed oo ah rikoodh rikoodh oo ragga ah
Dumarka ama kuwa doonaya wax qabow, madaxoodu waxay noqon karaan qiyaas dhexdhexaad ah. Haddii aad ka fekereyso inaad haysato dhabar yar, waxaa laga yaabaa inaad u tagto qayb ka mid ah dhakada. Tani waa wax aad ku sameyn karto suulasha, canqowga ama xitaa dhinaca gacanta. il image
18. Qurxinta maskaxda tifaftiran fikrada naqshadeynta haweenka
Talaashadu waxay noqon kartaa mid qurux leh oo midabyo leh oo xitaa ka dhigaysa mid waxtar leh. Waxaa jira qaybo kala duwan oo jirka ka mid ah oo naqshadeynta ay sameyn karto bayaanka xaraashka ah. Waxaad heli kartaa wax yar oo daali ah haddii aad ka tagto weyn xagga dhabarkaaga. il image
19. Fikrado buuxda oo cajiib ah oo loogu talagalay wiilasha
Isticmaalka dhakaatooyinka ayaa noqday mid caan ah oo xitaa xaasaska ay isticmaalayaan kuwa cabsida leh. Fariimaha ay ka soo baxaan qulqulka waxay ku xiran yihiin shaqsiga ku habboon naqshadda jirka. il image
20. Gaduudka ayaa la fuulay fikrado naqshad leh oo loogu talagalay gabdhaha
Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood, macnaheedu maahan wax badan oo ku saabsan isticmaalaha, marka laga reebo muuqaal ku xiran jirka. Waxaad ku dari kartaa naqshado kale taatuugaaga si aad u aragto mid gaar ah oo fariin kala duwan u dhiibo. il image
21. Fikradda dharbaaxada sawir gacmeed naqshadda garabka nin
Qurxinta dharabashadu waa midda ay ku xiran yihiin. il image
22. Naqshad jilicsan oo cajiib ah oo qurux badan oo lafdhabar u ah barta gabadha
Qayb ka mid ah jirka aad u baahan tahay inaad isticmaasho waa in si buuxda loo tixgeliyaa maxaa yeelay waxay go'aaminaysaa sida tattoo-gaaga yar ama weyn. il image
23. Qalabka dhegta dhagta ka dib ayaa fikradda naqshadeynta loogu talagalay gabdhaha
Xitaa waxaad xayeysiin kartaa xayawaankaas si aad u noqoto mid jinsi ah markaad ku dhejiso dhabarka dhan. Xitaa waxaad hagaajin kartaa sawirkaaga adoo helaya dhar xaraarad weyn oo jidhkaaga ah. il image
24. Garbahaaga qoorta ah, fikrada qalinka xiirta caanaha ee ragga
Markaad haysato farshaxanka wanaagsan, sawirkaaga waa nus dhamaystiran iyo marka tattoo loo saxo oo ka fiican, shaqada ayaa la dhammeeyaa. il image
Xiga 12 Skat Tattoos ee Dumarka
sawirada gabdhahaarrow TattoolammaanahaJoomatari TattoosTartoo ubax badantattoos sleevetattoo indhahahenna tattoojimicsiga bisadahatattoo dheemantattoos cagtaku dhaji tattooskoi kalluunkamuusikada muusikadagadaal u laabowaxaa la dhajiyay tattoostattoos qorraxdalibto libaaxtattoos moontattoo ah octopusDhaqdhaqaaqaTattoo infinitytattoo biyo ahtattoos qabaa'ilkatattoos saaxiib saxa ahfikradaha tattootaraagada kubbaddalaabto laabtagaraacista gacmahashimbir shimbirwaxay jecel yihiin tattoostattoo maroodigacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahshaatiinka shiidantattoos iskutallaabtanaqshadeynta mehnditattoos gacantatattoos qoortatattoos eagletattoos qosol lehtattoosTattoo Feathersawirada malaa'igtasawir gacmeedtattoos ubaxsawirrada raggatattoos taajkiiTilmaamta jaalaha ahTattoos Wadnahatattoo tilmaan